Warshadda Karinta Quwada Iron Iron-ka ee Iron Iron - Iron saarayaasha Soo-saareyaasha Iron Iron Iron,
1. Ka fudud oo dhaldhalaal dhanaan leh oo dhammeystiran oo kaamil ah oo karinta iyo u adeegidda. Xoq u adkaysta, u adkaysta wasakhda, aan sunta lahayn, dusha sare ee dhaldhalaalka madow ee dusha sare.
2. Gacan-ku-qabasho, gacan gees ballaadhan oo gees ah oo loogu talagalay raaxada iyo xasilloonida.
3. Saldhigga caatada ahi wuxuu abuuraa xitaa qaybinta kuleylka ka sii badan.
4. Naqshadaynta daboolka leh ee la jeexjeexay ayaa u fududeynaysa kulaylka gudaha ee cuntada qoyan ee qoyan.
Sharaxaadda Alaabta: JT101, JT102 Maaddada: Cabbir dhaldhalaalka ah: DIA: 25 * 5，26 * 5.5 Xirmid: Maaddada Carton: Birta ku dheji dhaldhalaalka gudaha. Birta kabka waxay si fiican u nuugtaa kulaylka waxayna ku habboon tahay soo kabashada. Dahaarka dhaldhalaalka ah wuxuu xaqiijinayaa saameyn aan ul lahayn. Ku habboon kululeeyeyaasha qulqulaya: digsiga buunshaha waxaa loo adeegsan karaa dhammaan noocyada wax ku karsigayaasha, oo ay ku jiraan ku daridda. Kuleyl u adkaysiga: waxaa loo isticmaali karaa foornada iyo dusha saliidda iyadoo aan wax dhibaato ah. Fowdo ku taal sagxadda hoose ee digsiga waxay xaqiijineysaa in baruurta ka baxdo iyo ...
Sharaxaadda Alaabta: HF 87A Maaddada: Cabbirka dhaldhalaalka ah: DIA: 23 * 23CM Xirmooyin: Waxyaabaha kartoonnada ah: bir bir leh dhaldhalaalka gudaha. Birta kabka waxay si fiican u nuugtaa kulaylka waxayna ku habboon tahay soo kabashada. Dahaarka dhaldhalaalka ah wuxuu xaqiijinayaa saameyn aan ul lahayn. Ku habboon kululeeyeyaasha qulqulaya: digsiga buunshaha waxaa loo adeegsan karaa dhammaan noocyada wax ku karsigayaasha, oo ay ku jiraan ku daridda. Kuleyl u adkaysiga: waxaa loo isticmaali karaa foornada iyo dusha saliidda iyadoo aan wax dhibaato ah. Dabaqa hoose ee digsiga ayaa xaqiijinaya in dufanka ka baxo oo hilibka ...
Sharaxaada Alaabta: Waxyaabaha JT: Cabbir dhaldhalaalka ah: DIA: 33.3 * 21.8 * 3.2 Xirmooyinka: Maaddada kartoonnada: bir bir leh dhaldhalaal gudaha. Birta kabka waxay si fiican u nuugtaa kulaylka waxayna ku habboon tahay soo kabashada. Dahaarka dhaldhalaalka ah wuxuu xaqiijinayaa saameyn aan ul lahayn. Ku habboon kululeeyeyaasha qulqulaya: digsiga buunshaha waxaa loo adeegsan karaa dhammaan noocyada wax ku karsigayaasha, oo ay ku jiraan ku daridda. Kuleyl u adkaysiga: waxaa loo isticmaali karaa foornada iyo dusha saliidda iyadoo aan wax dhibaato ah. Dabaqa hoose ee digsiga ayaa xaqiijinaya in dufanka ka baxo oo hilibka ...
Sharaxaadda Alaabta: HF70A ， HF 71A Maaddada: Cabbir dhaldhalaalka ah: DIA: 6.5CM ， DIA: 8 Xirmooyinka CM: Qalabka kartoonada: birta ku dheji dhaldhalaalka gudaha. Birta kabka waxay si fiican u nuugtaa kulaylka waxayna ku habboon tahay soo kabashada. Dahaarka dhaldhalaalka ah wuxuu xaqiijinayaa saameyn aan ul lahayn. Ku habboon kululeeyeyaasha qulqulaya: digsiga buunshaha waxaa loo adeegsan karaa dhammaan noocyada wax ku karsigayaasha, oo ay ku jiraan ku daridda. Kuleyl u adkaysiga: waxaa loo isticmaali karaa foornada iyo dusha saliidda iyadoo aan wax dhibaato ah. Fowdo ku taal sagxadda hoose ee digsiga ayaa xaqiijinaya in baruurta ka daadato la sugo ...
Sharaxaadda Alaabta: JT B29, JT B34 ： Maaddada: Kabka loo yaqaan 'Iron Enamel Cast' cabirka: 30 * 23 * 11，33.5 * 25.5 * 13.3 Xirmidda: sanduuqa 1.Lighter oo dhaldhalaal leh oo dhammeystirran ayaa kaamil ku ah karinta iyo u adeegidda. 2.Scratch u adkaysta, wasakh u adkaysta, aan sun lahayn, matte madow dusha sare ee dusha sare. 3.Sure-qabsashada, gacan qabasho ballaaran oo gees ah oo loogu talagalay raaxada iyo xasilloonida. 4.Thicker base wuxuu abuuraa xitaa qaybinta kuleylka ka sii badan. 5. Naqshadeynta daboolka qafiifka ah waxay fududeysaa kuleylka gudaha ee cuntada qoyan.
Sharaxaadda Alaabta: JT B29, JT B34 erial Maaddada: Kabka loo yaqaan 'Iron Enamel Cast' cabirka: 30 * 23 * 11，33.5 * 25.5 * 13.3 Xirmidda: sanduuqa 1.Ligter leh dhaldhalaal dhaldhalaalaan oo dhammeystiran oo kaamil ah oo karinta iyo u adeegidda. 2.Scratch u adkaysta, wasakh u adkaysta, aan sun lahayn, matte madow dusha sare ee dusha sare. 3.Sure-qabsashada, gacan qabasho ballaaran oo gees ah oo loogu talagalay raaxada iyo xasilloonida. 4.Thicker base wuxuu abuuraa xitaa qaybinta kuleylka ka sii badan. 5. Naqshadeynta daboolka qafiifka ah waxay fududeysaa kuleylka gudaha ee cuntada qoyan.
Sharaxaadda Alaabta: JT B29, JTB34 erial Waxyaabaha: Cast Dhaldhalaalka Birta Cabbirka: 30 * 23 * 11，33.5 * 25.5 * 13.3 Xirmooyin: Sanduuqa 1.Ligter leh dhaldhalaal dhaldhalaalaan oo dhammeystiran oo kaamil ah oo karinta iyo u adeegidda. 2.Scratch u adkaysta, wasakh u adkaysta, aan sun lahayn, matte madow dusha sare ee dusha sare. 3.Sure-qabsashada, gacan qabasho ballaaran oo gees ah oo loogu talagalay raaxada iyo xasilloonida. 4.Thicker base wuxuu abuuraa xitaa qaybinta kuleylka ka sii badan. 5. Naqshadeynta daboolka qafiifka ah waxay fududeysaa kuleylka gudaha ee cuntada qoyan.